Andy Rubin သည်နှုတ်ထွက်ပြီးနောက် Essential သို့ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် Androidsis
နောက်ဆုံး Andy Rubin သည် Essential သို့ပြန်သွားသည်
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်နီးပါးကကျွန်ုပ်တို့ကြားရသောသတင်းကိုကြားလိုက်ရသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်အန်ဒီ Rubin ကမရှိမဖြစ်ထွက်ခွာခဲ့သည်, ငါတို့သည်သူ၏လူ၌သင်တို့ကိုပြောသည်အဖြစ်။ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်ကုမ္ပဏီဟာကုမ္ပဏီကိုပိုပြီးစိတ်ချရတဲ့အနေအထားမှာထားရှိခဲ့သည် သင်၏မရှိမဖြစ်ဖုန်းသည်နှစ်၏အကြီးမားဆုံးသောဆုံးရှုံးမှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်.
သို့သော်ဤမတည်ငြိမ်မှုအခြေအနေသည်ကြာရှည်မခံသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပုံရသည် Andy Rubin သည် Google မှထွက်ခွာပြီးသူတည်ထောင်ခဲ့သောကုမ္ပဏီသို့ပြန်သွားသည်. သင်ကုမ္ပဏီသို့ပြန်သွားရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲ။
သူနုတ်ထွက်ကြောင်းကြေငြာသော်လည်း အန်ဒီရူဘင်အား Playground Global ရုံးခန်းများသို့ ၀ င်ထွက်ခွာခြင်းများကိုအကြိမ်ကြိမ်တွေ့ရသည်သူသည်စီအီးအိုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဤကုမ္ပဏီ၏ရုံးများသည် Essential ၏ရုံးများနှင့်တူညီသောနေရာတွင်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်ကုမ္ပဏီနှင့်ဝေးကွာခြင်းမရှိသေးပါ။
La Essential မှ Andy Rubin ရဲ့ချီတက်ပွဲ တစ် ဦး ထင်သောကြောင့်ထိုသို့ဖြစ်ပွားခဲ့သည် ဂူးဂဲလ်တွင်အလုပ်လုပ်စဉ်သူ၏ဌာန၌ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး နှင့်သူဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏အတွင်းပိုင်းပေါ်လစီများကြောင့်ကုမ္ပဏီကခွင့်မပြုပါ။ Rubin ၏ရှေ့နေများကသူသည်စည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်နေသည်ဟူသောအတွေးကိုတသမတ်တည်းငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
အဲဒီအကြောင်းကြောင့် ကုမ္ပဏီမှထွက်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ နှစ်ပတ်အကြာတွင်သူသည်ပြန်လာပြီးအလုပ်ပြန်လုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်ထိုချီတက်ပွဲသည်ခေတ္တမျှသာဖြစ်ပုံရသည်။ ဒါဟာဘို့ပုံရသည် Essential Phone အသစ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမောင်းနှင်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးထုတ်ဝေ၏ပျက်ကွက်ကျော်လွှားရန်နှင့်အတူမော်ဒယ်အသစ်။
မော်ဒယ်သစ်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တစ်လျှောက်လုံးဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ အန်ဒီရူဘင်နှင့်ပြtheနာများသည်ကုမ္ပဏီ၏အစီအစဉ်များကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ လာမည့်သီတင်းပတ်များအတွင်းသင်၏အနာဂတ်အစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုကြားနာရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » နောက်ဆုံး Andy Rubin သည် Essential သို့ပြန်သွားသည်
Android အတွက် Passbook အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာများ